Isitudiyo esihle esinendawo yokujonga intaba - I-Airbnb
Isitudiyo esihle esinendawo yokujonga intaba
USara ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Indawo yokuhlala iyinxalenye yesakhiwo esiphambi kwentaba kwindawo ezolileyo kakhulu. Indawo apho uya kufumana uxolo lweentaba kodwa kunye nethuba lokuhamba ngeendlela ezahlukeneyo, ukufikelela kwi-Champorcher kunye neencopho ngemoto yekhebula kwaye ebusika amathambeka.
Indlu incinci kodwa yamkelekile kakhulu ibandakanya indawo yekhitshi ehlaziyiweyo ene-induction hob, igumbi lokuhlala elikhulu elijika libe yindawo yokulala ngenxa yebhedi yesofa etofotofo. Ibhedi yebhedi, kwelinye icala, ibekwe kwikona 'egciniweyo' ngakumbi apho kukho umkhusane ukwahlula iindawo.
Indawo eyomeleleyo yale ndlu yimbono yeentaba zombini ukusuka kwindawo yokuhlala kunye ne-terrace. Ngokuchanekileyo le yokugqibela iba yimfuneko ngeentsuku ezinelanga. Uya kufumana kwakhona itafile yangaphandle kunye ne-ambrela. Igumbi lokuhlambela lihlaziywe ngokupheleleyo lithanda ishawa ebanzi. Indlu ixhotyiswe ngesitovu se-pellet esihlala siluncedo ukusuka ekwindla ukuya entwasahlobo kwaye kukho umzila wethawula eshushu kwigumbi lokuhlambela.
I-hamlet i-Petit Rosier yindawo ethule kakhulu, efanelekileyo kwabo bathanda ngokwenene iintaba. Kubantwana eyona nto ifanelekileyo njengoko ingaxakekanga kakhulu kwaye kunye nebala lokudlala elincinci lisisikwere apho ngokuhlwa unokudibana ukuze udlale kunye! Ilungele ukuhamba okufutshane okanye ukuhamba kwiindlela ezintsonkothileyo. Iikhilomitha ezimbalwa ukusuka kumathambeka e-Champorcher ski. Ivenkile ekufutshane ikwindawo yaseMellier, efikeleleka ngemoto malunga neekhilomitha ezimbini ukusuka okanye ngendlela entle eqala ngqo phantsi kwendlu. EMellier uya kufumana ivenkile yasentabeni eqhutywa nguPaolo apho unokuthenga khona ubisi, itshizi kunye neyogathi ukuya kwizikhumbuzo, iziqhamo kunye nemifuno. Kukho ithuba lokufumana isidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa kwiiklabhu / iibhari ezimbini eziqhelekileyo nezingabizi kakhulu kunye nokuvumela abantwana badlale kwindawo ephangaleleyo yokudlala.
Ukufudukela e-Champorcher, apho uya kufumana i-ofisi yolwazi lwabakhenkethi, unokuthi endaweni yoko uthathe uhambo olukhululekile okanye udle isidlo sasemini kwiitafile zokhuni ngasemlanjeni kwaye uthathe i-nap phantsi kwemithi okanye uhambo oluya kwiindawo eziphakamileyo kunye nemoto yentambo.
Sifumaneka kakhulu kuwo nawuphi na umbuzo okanye imfuno. Singathanda ukuququzelela ingqokelela yezitshixo zendlu eTurin.